Ngosipụta nke saịtị ahụ
PMU bụ ndị na-ege ntị akụkọ ihe mere eme, ma na-enyekwa egwuregwu ịgba ọsọ egwuregwu zuru oke. Na iwusi ya ike, saịtị ahụ meghekwara ngalaba etinyebere na poker.
Anyị ahụla na PMU agbanweela, ọ bụghịzị ọ bụ naanị ihe mmeri nke Quinte Quette, ebe ikuku PMU nwere nnukwu Dede na tebụl.
Anyị na isiokwu a, anyị agaghị ekwu maka ahịhịa ma ọ bụ poker. Ya mere, ọ bụ maka ọdịmma anyị ka anyị na-ekwu, na ihe na eche anyi, egwuregwu egwuregwu ịkụ nzọ PMU.
Ihe nkwụnye ego mbu
100% Ruo £ 140
Gaa ebe a
100% Ruo £ 100
100% Ruo £ 130
100% Ruo £ 200
Mpempe ndị a na-enye ọtụtụ ụdị egwuregwu ịgba bọl naanị maka ihe omume ma ọ kachasị enye nhọrọ nhọrọ egwuregwu dị iche iche.
Esere saịtị a na-emelite oge niile. O dokwara anya na ibuli ihe a na-ahụ anya bụ ezigbo ihe ịga nke ọma ma e jiri ya tụnyere ihe ochie.
Mana obughi igha ntughari nke oma na saịtị a. Mgbe ụfọdụ, o siri ike ịchọta ihe anyị na-achọ ma saịtị a na-agbagha oge ụfọdụ.
NJ ezie na enwere ike inwe nchekwa, enweghi mgbu iji. Agbanyeghị, ọmarịcha ihe ịga nke ọma saịtị na ngwa ọdịnala. Achọpụtara ntụpọ ole na ole na nzọ a bụ na ntụgharị ụwa, egwuregwu na poker mgbe ụfọdụ kewapụrụ, mana anyị hụrụ ya n’enweghị nsogbu ọ bụla.
Onyinye ịkụ nzọ dị na egwuregwu PMU
Ọ bụ nzọ ARJEL na-enye ndị kasị adọrọ mmasị maka ụmụ nwanyị nwere obere egwuregwu. Egwuregwu niile dị na PMU, ọ bụrụ golf, billiards ma ọ bụ baseball; ha nile no ebe a.
O doro anya na ugbu a n’egwuregwu Olympic (fencing, judo, egwuregwu equestrian, hockey… wdg), kamakwa ndi nke n’egwuregwu Oyiyi (skai, biathlon, na-achụta, bobsleigh… wdg) na-anọchi anya.
Ma football, tenis, bọọlụ, isi rugby egwuregwu na bọọlụ aka, tere aka nke ileghara anya.
Na pmu.fr ị nwere ike ịgba mgba na asọmpi ịgba bọl niile. Yabụ, iko mba uwa, Euro, Njikọ Champions, Njikọ Njikọ, Premier League, na ọbụna asọmpi French anyị 1 na Njikọ 2 bụ.
N'ezie, also ga-abụkwa ọtụtụ asọmpi mba na iko, ọ nweghị ihe kọrọ.
N'otu aka ahụ, maka tenis na pmu.fr ị nwere ike ịgba nzọ na Roland Garros ma ọ bụ Wimbledon na asọmpị Grand Slam ndị ọzọ na ATP na WTA asọmpi.
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọkpọkụ rugby, ị nwere ike nzọ na World Cup, Asọmpi Mba Iri, mba ndị na-ahụ maka ọkụ, Isi 14 na ọtụtụ asọmpi ndị ọzọ dị.
Fan nke United States, ị nọrọ ọtụtụ abalị na PMU. Na NFL (football american, na okpokoro isi, ice hockey (LNH) na N'ezie NBA, ị nwere nhọrọ dị iche iche dị na asọmpi paris kachasị amasị gị.
Njirimara nke saịtị
Karịsịa nke ahụ maka egwuregwu ọ bụla, have nwere ọkara nke mkpụrụ ego iri isii dị ka egwuregwu ma ọ bụ ndụ, megide 30-40 site na ọtụtụ saịtị.
Ọtụtụ nzọ dị, ị nwere ike nzọ na egwuregwu mmeri, ma obughi naani. Can nwere ike nzọ na mgbaru ọsọ ma ọ bụ obere (ma ọ bụ isi ihe) n’elu ndi n’eto ihe, aka paris, ọkara oge ma ọ bụ ịkụ nzọ ...
Short, na enwere ike buru ibu, bets ga - ahụ nza na-amasị gị.
Ndụ gbakwunyere na-enye PMU nzọ na ọtụtụ egwuregwu, mgbe na-elu arụmọrụ ndụ video. Pmu bụ n'ezie saịtị zuru oke nke na-enye usoro ịkwụ ụgwọ. Isi enyemaka n'ịntanetị na ikarịta ụka na ntanetị 7 ụbọchị / 7.
Nke a bụ ihe zuru oke ma nwee ntụkwasị obi na ọ bụ ya mere ejiri were otu ebe kachasị mma na ogo anyị.
Nabata ego bụ 100 Euro nyere maka akụkụ nke ịkụ nzọ egwuregwu. Nke a na ego ga-agbadata ọnụ ọgụgụ dị elu karịa, ma ọ bụrụ na tojupụtara na Turf na Poker bonus egwuregwu. Nke ahụ na - enweta ego n'ụzọ dị mfe na enweghị ihe ize ndụ.
Nke a bụ ụdị egwuregwu ịgba agba egwuregwu ị nwere ike izute nzọ na PMU, ị ga-ahụ ndepụta zuru ezu http://www.pmu.fr/sport na vidiyo nke na-akọwa n'ụzọ zuru ezu.
Mara mara na amachibidola ụfọdụ Paris iwu na France, tumadi ndị metụtara eziokwu egwuregwu (kaadị edo edo mbụ, 1 igodo), yana ndị nọ na egwuregwu na-enweghị nsogbu ọ bụla (ozi ndị ọzọ). Nke a bụ oke aghụghọ.
Mara na otu egwuregwu asọmpi emeela ka ihe karịrị 50 000 paris (isi mmalite) na 90% ndị mfe nzọ. Typesdị ndị ọzọ nwekwara ike ịmasị gị ma ọ bụrụ na njikwa.
Next Next post: PMU daashi